ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဆန်အမျိုးအစားတွေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုဓာတ်များ
10 Aug 2018 . 6:34 PM
ဆန်က လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် နေ့စဉ်စားသောက်နေရတဲ့ အစားအသောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် စွမ်းအင်တွေ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် ပေါများစွာပါဝင်တဲ့ ဆန်ကို လူတိုင်းနေ့စဉ် စားသုံးပေးကြရပါတယ်။ အဲဒီလို နေ့စဉ်စားသုံးပေးတဲ့ ဆန်မှာလည်း အမျိုးစားကွဲတွေ များစွာရှိပါတယ်။ အဲ့အမျိုးအစားကွဲတွေကတော့ White Rice ၊ Brown Rice ၊ Black Rice နဲ့ Red Rice တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘယ်ဆန်အမျိုးအစားမှာ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအကျိုးအာနိသင်ကို ပေးစွမ်းတဲ့ ဓာတ်တွေပါဝင်လဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့အတွက် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) White Rice
White Rice ဆိုတာက အခွံချွတ် ကြိတ်ခွဲထားပြီး ဖွဲနုတွေနဲ့ ပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားသန့်စင်ထားပြီးတဲ့ ဆန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖယ်ထုတ်သန့်စင်လိုက်တဲ့အတွက် ရလဒ်အနေနဲ့ White Rice က Brown Rice၊ Black Rice နဲ့ Red Rice တွေလောက် အာဟာရဓာတ်မကြွယ်ဝတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် White Rice 100g မှာ Protein 6.3g ပါဝင်ပြီး အမျှင်ဓာတ်အနည်းငယ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျှင်ဓာတ်က အပြင်အခွံမှာ ပါဝင်တာဖြစ်လို့ အပြင်ခွံကို ချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ အမျှင်ဓာတ်က မပါရှိသလောက် နည်းပါးသွားပါတယ်။ White Rice မှာ သံဓာတ်ပါဝင်ပေမယ့် Brown Rice ထက်တော့ ပါဝင်မှုနှုန်း နည်းပါးပါတယ်။
(၂) Brown Rice
Brown Rice ဆိုတာကတော့ အပြင်အခွံကိုသာ ချွတ်ထားတဲ့ အဆီအနှစ်ပြည့်ဝတဲ့ ဆန်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Brown Rice က White Rice ထက် ဝါးလို့ပိုကောင်းပြီး ဆိမ့်တဲ့အရသာရှိကာ အာဟာရဓာတ်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ Brown Rice မှာ လူတွေကို အကျိုးပြုစေတဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး ဇင့်ဓာတ် အလယ်အလတ်ပါဝင်ပါတယ်။ Brown Rice မှာ အပြင်အခွံရှိတဲ့အတွက် အမျှင်ဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ Brown Rice 100g မှာ အမျှင်ဓာတ် 3.2 g ပါဝင်ပါတယ်။
(၃) Black Rice
Black Rice က ဆိမ့်တဲ့အရသာရှိပြီး White Rice ထက် အချိန်ပိုကြာကြာ ချက်ပြုတ်ပေးရပါတယ်။ Black Rice 100g မှာ Protein 9.1g ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီဆန်က ဆီးချိုရောဂါသမားတွေ စားသုံးပေးဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဆန်အမျိူးအစားထဲမှာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Black Rice 100g မှာ အမျှင်ဓာတ် 4.7 g ပါဝင်ပါတယ်။
(၄) Red Rice
Red Rice မှာ Anthocyanin ရောင်ခြယ်ပါဝင်တဲ့အတွက် အခြားသော ဆန်အမျိုးအစားတွေနဲ့ မတူဘဲ ထူးခြားတဲ့အရောင် ရှိနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆန်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုကို ကြီးမားစွာ မြှင့်တင့်ပေးနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆန်အမျိုးအစားမှာ အခွံချွတ်ထားတဲ့ဆန်နဲ့ အခွံမချွတ်ထားတဲ့ဆန်ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Red Rice 100g မှာ Protein 7g ပါဝင်ပြီး အမျှင်ဓာတ် 2g ပါဝင်ပါတယ်။ Red Rice နဲ့ Black Rice နှစ်မျိုးလုံးဟာ White Rice ထက်စာရင် အာဟာရဓာတ်ပိုပါဝင်တဲ့အတွက် ဈေးလည်း အရမ်းကြီးပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်ဆန်ကအကျိုးများလဲမေးရင် Black Rice နဲ့ Brown Rice က ပိုအကျိုးများတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ Black Rice နဲ့ Brown Rice ကို စားခြင်းဖြင့် အမျှင်ဓာတ်ပိုမိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်က ဗိုက်ဆာလောင်မှုကို သိပ်မဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင် ဝမ်းချုပ်ခြင်းမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Black Rice နဲ့ Brown Rice ချည်းပဲစားရတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ White Rice နဲ့ ရောစပ်ပြီးလည်း စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။
ဆန်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုဓာတ်တွေကို သိပြီဆိုတော့ ကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့ ဓာတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုက်ညီတဲ့ဆန်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ကာ စားသောက်ပေးခြင်းနဲ့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်လိုက်ကြရအောင်။
ကှဲပွားခွားနားတဲ့ ဆနျအမြိုးအစားတှနေဲ့ ပါဝငျတဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးပွုဓာတျမြား
ဆနျက လူတိုငျးအတှကျ မရှိမဖွဈ နစေ့ဉျစားသောကျနရေတဲ့ အစားအသောကျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ စှမျးအငျတှေ ပွနျလညျဖွညျ့တငျးနိုငျဖို့အတှကျနဲ့ ဦးနှောကျရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှေ ပုံမှနျလညျပတျနိုငျဖို့အတှကျ ကာဘိုဟိုကျဒရိတျ ပေါမြားစှာပါဝငျတဲ့ ဆနျကို လူတိုငျးနစေ့ဉျ စားသုံးပေးကွရပါတယျ။ အဲဒီလို နစေ့ဉျစားသုံးပေးတဲ့ ဆနျမှာလညျး အမြိုးစားကှဲတှေ မြားစှာရှိပါတယျ။ အဲ့အမြိုးအစားကှဲတှကေတော့ White Rice ၊ Brown Rice ၊ Black Rice နဲ့ Red Rice တို့ပဲ ဖွဈကွပါတယျ။ ဘယျဆနျအမြိုးအစားမှာ ဘယျလိုကနျြးမာရေးအကြိုးအာနိသငျကို ပေးစှမျးတဲ့ ဓာတျတှပေါဝငျလဲဆိုတာ သိနိုငျဖို့အတှကျ အောကျမှာ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
White Rice ဆိုတာက အခှံခြှတျ ကွိတျခှဲထားပွီး ဖှဲနုတှနေဲ့ ပိုးမှားတှကေို ဖယျရှားသနျ့စငျထားပွီးတဲ့ ဆနျကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလို ဖယျထုတျသနျ့စငျလိုကျတဲ့အတှကျ ရလဒျအနနေဲ့ White Rice က Brown Rice၊ Black Rice နဲ့ Red Rice တှလေောကျ အာဟာရဓာတျမကွှယျဝတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ White Rice 100g မှာ Protein 6.3g ပါဝငျပွီး အမြှငျဓာတျအနညျးငယျလညျးပါဝငျပါတယျ။ အဲ့ဒီအမြှငျဓာတျက အပွငျအခှံမှာ ပါဝငျတာဖွဈလို့ အပွငျခှံကို ခြှတျလိုကျတဲ့အခါမှာ အမြှငျဓာတျက မပါရှိသလောကျ နညျးပါးသှားပါတယျ။ White Rice မှာ သံဓာတျပါဝငျပမေယျ့ Brown Rice ထကျတော့ ပါဝငျမှုနှုနျး နညျးပါးပါတယျ။
Brown Rice ဆိုတာကတော့ အပွငျအခှံကိုသာ ခြှတျထားတဲ့ အဆီအနှဈပွညျ့ဝတဲ့ ဆနျအမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။ Brown Rice က White Rice ထကျ ဝါးလို့ပိုကောငျးပွီး ဆိမျ့တဲ့အရသာရှိကာ အာဟာရဓာတျမြားစှာ ပါရှိပါတယျ။ Brown Rice မှာ လူတှကေို အကြိုးပွုစတေဲ့ မဂ်ဂနီဆီယမျဓာတျမြားစှာပါဝငျပွီး ဇငျ့ဓာတျ အလယျအလတျပါဝငျပါတယျ။ Brown Rice မှာ အပွငျအခှံရှိတဲ့အတှကျ အမြှငျဓာတျလညျး ကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ Brown Rice 100g မှာ အမြှငျဓာတျ 3.2 g ပါဝငျပါတယျ။
Black Rice က ဆိမျ့တဲ့အရသာရှိပွီး White Rice ထကျ အခြိနျပိုကွာကွာ ခကျြပွုတျပေးရပါတယျ။ Black Rice 100g မှာ Protein 9.1g ပါဝငျပါတယျ။ ဒါအပွငျ ဒီဆနျက ဆီးခြိုရောဂါသမားတှေ စားသုံးပေးဖို့ သငျ့တျောတဲ့ ဆနျအမြိူးအစားထဲမှာလညျး ပါဝငျပါတယျ။ Black Rice 100g မှာ အမြှငျဓာတျ 4.7 g ပါဝငျပါတယျ။
Red Rice မှာ Anthocyanin ရောငျခွယျပါဝငျတဲ့အတှကျ အခွားသော ဆနျအမြိုးအစားတှနေဲ့ မတူဘဲ ထူးခွားတဲ့အရောငျ ရှိနရေခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီဆနျရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြမှုကို ကွီးမားစှာ မွှငျ့တငျ့ပေးနိုငျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဆနျအမြိုးအစားမှာ အခှံခြှတျထားတဲ့ဆနျနဲ့ အခှံမခြှတျထားတဲ့ဆနျဆိုပွီး နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ Red Rice 100g မှာ Protein 7g ပါဝငျပွီး အမြှငျဓာတျ 2g ပါဝငျပါတယျ။ Red Rice နဲ့ Black Rice နှဈမြိုးလုံးဟာ White Rice ထကျစာရငျ အာဟာရဓာတျပိုပါဝငျတဲ့အတှကျ ဈေးလညျး အရမျးကွီးပါတယျ။
ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘယျဆနျကအကြိုးမြားလဲမေးရငျ Black Rice နဲ့ Brown Rice က ပိုအကြိုးမြားတယျလို့ပဲ ပွောရမှာပါ။ Black Rice နဲ့ Brown Rice ကို စားခွငျးဖွငျ့ အမြှငျဓာတျပိုမိုရရှိစနေိုငျပါတယျ။ အမြှငျဓာတျက ဗိုကျဆာလောငျမှုကို သိပျမဖွဈစနေိုငျတဲ့အပွငျ ဝမျးခြုပျခွငျးမဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ Black Rice နဲ့ Brown Rice ခညျြးပဲစားရတာ မကွိုကျဘူးဆိုရငျတော့ White Rice နဲ့ ရောစပျပွီးလညျး စားသုံးပေးလို့ရပါတယျ။
ဆနျတှမှော ပါဝငျတဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးပွုဓာတျတှကေို သိပွီဆိုတော့ ကိုယျမှာလိုအပျနတေဲ့ ဓာတျပျေါမူတညျပွီး ကိုကျညီတဲ့ဆနျအမြိုးအစားကို ရှေးခယျြကာ စားသောကျပေးခွငျးနဲ့ ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျလိုကျကွရအောငျ။
by Moethae Say . 26 mins ago
by yoelu . 18 hours ago